Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Horohoron-tany mafy tany El Salvador
Horohoron-tany mahery, manana 6.6 maridrefy mialoha, no namely ny morontsirak'i Salvadaoro. Ilay horohoron-tany dia nandefa ireo mponina natahotra nihazakazaka nivoaka ny tranony tamin'ny ora maraina.
Araka ny US Geological Survey (USGS), ny ivon'ilay horohorontany dia teo amin'ny 17 kilaometatra atsimoatsinanan'ny La Libertad, tanàna manodidina ny renivohitra faritra, Santa Tecla. 40 kilaometatra ny halaliny.
Tsapa mafy ny horohorontany tao San Salvador renivohitra, ny alakamisy maraina. Nandao ny tranony tamin'ny jiro jiro ny olona, ​​ary natsipy ny herinaratra tamin'ny faritra sasany farafaharatsiny.
Ny horohoron-tany mafy dia tsapa ihany koa tany Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, ary Mexico.